Agaasimaha Guud ee Boostada iyo Isgaarsiinta oo ka qeybgalay shir ka dhacay Addis-ababa – Radio Muqdisho
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Axmed Xaaji Cabdi ayaa ka qaybgalay shir labadii maalmood ka socoday magaalada Addis-ababa ee xarunta dalka Ethiopia kaa soo maanta la soo gebagebeeyey loogana hadlayay horumarinta isgaarsiinta waddamada qaar ee Africa.
Shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay’ad midowga Yurub u qaabilsan horumarinta Afrika oo saldhigeedu yahay magaalada Addis-ababa ayaa looga dooday laguna soo bandhigay horumarka waddamada Afrika ay ka gaareen dhinaca Isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan sida Internetka Xawliga ah(Broadband) Maamulid iyo Qorsheynta Hirarka (Spectrum and Frequency Management) iyo talaabooyinka looga baahanyahay waddamada Afrika inay qaadaan si Qaaraddu wax ula qaybsato waddamada hormaray gaar ahaan dhanka Isgaarsiinta.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo hadal ka jeediyay shirka ayaa ka codsaday hay’adda shirka qabanqaabisay iyo hay’adaha caalamiga ah ee qaabilsan Isgaarsiintu inay dalka Soomaaliya ka caawiyaan horumarinta sharciyada Isgaarsiinta.
Agaasimaha ayaa kulamo gooni gooni ah la yeeshay wakiiladii ka socday Hay’adda Isgaarsiinta Afrika iyo Wakiildii ka kala socday dalka South Afrika, Kenya iyo Tanzaniya kana codsaday in wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta laga caawiyo dhanka tababarada.
Shirkan ayaa waxaa kasoo baxay qodobo muhiim ah oo ay kamid tahay in waddanka Soomaaliya il gaar ah lagu fiiriyo lagana shaqeeyo sidii looga caawin lahaa horumarinta sharciyada Isgaarsiinta iyo taabagalinta qorshayaasha Isgaarsiinta Qaaradda.
Isbitalkii deegaanka Godinlabe oo dib loo howlgaliyay"sawiro"